Kedu otu ọkpụkpụ afọ nke SEO dịruru mkpa?
Enwere ezigbo mmekọrịta n'etiti otu afọ ọgbọ na SEO arụmọrụ na nkwado ihuenyo Google? Ajụjụ a gbasara Nyocha Search Engine na otú o nwere ike isi jikọta ya na ụbọchị ndebanye aha bụ ihe dị mkpa, nke ndị ọkachamara webmasters na-atụle ugboro ugboro, yana ọtụtụ ndị na-ere ahịa n'ịntanetị.
Kasị ka, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na-akwụsị na oge ọgbọ na SEO na-arụ ọrụ n'aka. Site na ndabara, echiche ha ugbu a banyere otú oke oge maka SEO si dị iche, ọ bụ ezie na ha na-eme ụfọdụ uche ha n'ụzọ ha:
afọ ngalaba enweghị mmetụta na SEO, ya mere na Google ogo ọ bụla
afọ ngalaba bụ naanị otu n'ime ihe dị iche iche nke àgwà ndị ọzọ gụnyere na ogo algorithms nke Google
oge agbụrụ na-arụ ọrụ dị oke mkpa maka ịnweta ọkwa kachasị elu na SERPs
Ọzọkwa, ebe a bụ isi ihe abụọ dị mkpa n'azụ mkparịta ụka ugbu a gbasara oge ọgbọ na SEO:
na-eche echiche na a na-eji spammers tinye ngalaba ọhụrụ na ndekọ na ngwa ngwa dobe ha, aha ndị ọhụrụ edenyere aha na-ejikarị arụ ọrụ site na iweghachite mgbagha, aha ochie aha ga-apụta na ebe nrụọrụ weebụ dị mma ma dị mma, dị ka nke ọma ndị a kwụsiri ike na-eji otu ngalaba ahụ eme ihe maka afọ
Ọfọn, anyị na-ahụ ọtụtụ amaghị ihe ebe a. Ma, otu ihe m nwere ike ịgwa gị nke ọma - afọ ole na ole ngalaba ahụ dị mkpa mgbe a tụlere ya na ndị nwe ya. M na-ekwu na mgbe onye nwe ụlọ nwe ogologo oge dị ọcha ma dị ọcha na ihe ndekọ Google, ọ gaghị ewetara gị ọbụlagodi mmetụta ọjọọ, ị ga-ekpebi ịzụta ihe dị ugbu a ma jiri ngalaba ahazi. N'aka nke ọzọ, Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ngalaba "ọjọọ," ma ọ bụ na mbụ amaara dị ka spam ma ọ bụ ọbụna na Google meriri tupu oge ụfọdụ.
Iji gbochie ihe omume ọjọọ dị otú a na-eme, ndị ọkachamara na-atụ aro ka ị tụlee naanị ngalaba ndị ahụ maka ire ere, nke nwetara ozi ọha mmadụ dị. Ee, ndị scammers nwekwara ike ichebe onwe ha, dịka ọmụmaatụ ajụjụ ndị Whois, ekwesịrị ikweta. Ka o sina dị, nke a ga-eme ka enyo gbaa ha gburugburu.
N'ụzọ dị otú ahụ, ana m akwado ịnweta ndekọ abụọ nke afọ ngalaba ya na akụkọ ihe mere eme tupu ya emee ihe. E nwekwara ọtụtụ ụlọ ọrụ bara uru dị na ịnweta ohere iji chọpụta mgbe e debanyere aha otu aha. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịnwale ngwá ọrụ Ngwá Ngwá Agha ịchọpụta mgbe Google na-atụgharị bọtịnụ maka oge mbụ. Ime nke a, ị nwere ike ịmata aha ngalaba aha kachasị mma bụ ndị a kpọrọ dị ka ndị a pụrụ ịtụkwasị obi, ebe ọ bụ na e nyewo ha maka nsonaazụ dị mma ha na-adịte aka, ya mere ọ bụ nke ọma na SERPs.
Ntuba, Otú ọ dị, aro m apụtaghị na ọ bụrụ na aha ọhụrụ a ga - eme ka agha ghara ịlụso ndị toro eto aka, yabụ nwere ike inwe ike ịrịgo n'elu nsonaazụ ọchụchọ. "Okenye bụ ngalaba aha ị nwere, ọkwa dị elu ị ga-enweta" - nke ahụ enweghị ike ịbụ 100% ọfụma. Na-eburu n'uche, na oge ọrụ ọma metụtara ikike ngalaba, anyị kwesịrị ikweta. Ka o sina dị, otu afọ afọ na SEO ka nwere ike ịkwanye ogo weebụ na ụzọ nke aka ha, ma nke ọma na ihe ọjọọ Source .